घरमा सबैको फ्रेब्रेट हुदा पनि आफुलाई खराब श्रीमती बताउछिन प्रियंका, यस्तो छ कारण ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywoodघरमा सबैको फ्रेब्रेट हुदा पनि आफुलाई खराब श्रीमती बताउछिन प्रियंका, यस्तो छ कारण !
March 30, 2019 Tulasa Karki Bollywood, News 0
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र निक जोनसको विवाह भएको झन्डै ४ महिना हुन लागेको छ । विवाह भएको यति समय बित्दा पनि यी दुईको रोमान्समा भने कुनै कमि आएको छैन ।
भखरै प्रियंका र निक आफ्नो परिवारको साथमा फ्लोरिडाको मायामीमा छुट्टि मनाउन गएका थिए । जुन फोटो सोसल मिडियामा पनि निकै भाइरल बनेको थियो । प्रियंकाले आफ्नो परिवारको साथमा निकै मस्ती गरेकी छिन ।
आफु भन्दा कति वर्ष सानी जेठानी तथा निकको जेठो भाइको छोरीसँग उनले वॉटर स्पोर्ट्समा निकै रमाइलो गरेको फोटो पनि निकै चर्चामा आएको थियो । यी फोटोबाट यो पनि बुझिन्छकी उनि निकको घरका सबै सदस्यको फ्रेब्रेट हुन् ।
तर यो सबै हुदा पनि प्रियंकाले आफुलाई निकै खराब श्रीमती बताउछिन । यो कुरा हो केहि समय अगाडी एबीसी च्यानलको शो The View को । जहाँ उनि पाहुना बनेर गएकी थिन । सोहि समय उनले आफुलाई terrible wife यानिकी खराब श्रीमती भनेकी छिन । यो भन्नुको मुख्य कारण भने उनलाई खाना बनाउन नआउनु हो ।
उनले आफुलाई खाना बनाउन नआउने भएको आफुलाई खराब श्रीमती बताएकी हुन् ।
फिल्म “लवजोन“को दोश्रो गीत “ट्याटु खोपन”